Esona sizathu sokuQesha iMithombo yeendaba yeNtlalo | Martech Zone
Esona sizathu sokuQesha iGugu leMithombo yeendaba
NgeCawa, ngoSeptemba 26, 2010 NgoMvulo, Aprili 20, 2015 Douglas Karr
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ndisebenze ngokungakhathali ukwakha oku kulandelayo kwi-Intanethi, igunya, kwaye ekugqibeleni ndikhula kakuhle ishishini. Ngoku, ndijamelene nabantu abanqwenela ukuqesha iinkonzo zam ukuze ndibancede benze okufanayo. Ngamanye amaxesha yinkampani enkulu enetalente entle kwaye ndiyakwazi ukuhambisa. Ngamanye amaxesha akunjalo kwaye ndinikezela ngenkonzo eyahlukileyo.
Kule minyaka, ndibukele abanye begqitha kum kwi-Intanethi kwaye ndifunde okuninzi. Ndigqithile kwabanye abaninzi… bambalwa kakhulu abanencwadi epapashiweyo okanye ishishini labo elijolise kubungcali babo. Ndibonelelwe ngumbono wokuba yintoni esebenzayo, yintoni engasebenziyo, loluphi utyalo mali olunokuqalisa igunya lakho, kunye nokuba yintoni enokwenzakalisa.
Nangona kunjalo, lonke olo lwazi ayisosona sizathu sokufuna ukundiqesha. Olo lwazi lukhona… lukwi-intanethi ngeebhlog zam, my ukubhloga kwishishini incwadi, kunye neentetho zam. Ukuba uyandilandela, okanye enye ebizwa ngokuba yiyo kwimithombo yeendaba zentlalo, phantse bonke babeka ulwazi phaya ngaphandle simahla. Ngokuqinisekileyo-uninzi lubonelela ngamathuba oqeqesho afinyeziweyo okufumana ikhosi yengozi (sisizathu esihle sokuba usibukele sithetha)… kodwa inqaku kukuba usenokuyifumana ngaphandle kokusiqesha.
Into ongayifumani simahla ligunya lethu. Imithombo yeendaba zosasazo kwezentlalo inezinto zilandelayo-ngaphakathi kwe-niche entle. I-niche yam yintengiso ye-Intanethi, ukuthengisa ngaphakathi kunye nokubandakanya ukukhangela, ezentlalontle kunye nezinye iitekhnoloji ezikwi-Intanethi ukwakha ishishini. Ngelixa ndibonisana neenkampani ezininzi kwezi zihloko - ezinye iinkampani ezithe zatyala imali kwiinkonzo zam zifuna into eyahlukileyo…
Bafuna eyam u kuvunywa ukuze babe nako ukwakha igunya ngokukhawuleza… ngokunjalo ukufikelela kubaphulaphuli bam.
Abalandeli, abalandeli, abafundi kunye nababhalisi zizinto ezixabisekileyo kule mihla… ngakumbi ukuba ungaqhubeka nokukhula oku kulandelayo. Abanye abantu bandicela ukuba ndithethe kuba bayibonile kwaye bayayonwabela intetho yam-kodwa abaninzi kakhulu bandicela ukuba ndithethe kuba bayazi ukuba ndiza kukhuthaza ishishini labo okanye inkomfa yabo kubaphulaphuli bam. Ukuba ndiyathetha- ndifuna ukuba ibe sisiganeko esihle… ithengiswe nge-buzz kuyo yonke i-Intanethi. Kukho konke ukunyaniseka, mancinci amathuba okuba ndikhuthaze umcimbi andithathe nxaxheba kuwo… andivuyi ngabo ngokwaneleyo ukuba ndibanyuse ngokunyanisekileyo… kwaye abaphulaphuli bam bangatsho.
Oko kwathethi, ndiwathatha nzulu amathuba am okuthetha kunye nokuvunywa. Andikhuphi ngaphandle ukuvuma ngaphandle kokukholelwa kumthombo-nokuba ndiyabhatalwa ngokwenza njalo. Ndisebenza neenkampani ezininzi endingakhange ndizikhankanye kwi-intanethi. Ayikuko ukuba andikholelwa ukuba kufanelekile, kukuba ayizukubaluleka ukubakhankanya kubaphulaphuli bam. Isingeniso siza kujonga ngaphandle kwendawo kwaye sinyanzelwe.
Ndiyamangaliswa linani le- kwimithombo yeendaba zentlalo ababonelela ngezithuba ezihlawulelweyo, ii-tweets ezihlawulelweyo kunye nokuxhaswa okungakhange kuqinisekiswe ukuba banikezela ngexabiso kubaphulaphuli babo. Bafaka iifoto zetshezi kunye nabo bemi ecaleni komntu obalulekileyo ukuze ngandlela thile babonelele ukuba kufuneka babaluleke… bona ifoto engasentla;).
Ndenza zonke iinzame zokuthintela obu buchule… iya kuba sisithuko kubaphulaphuli endisebenze nzima ukwakha kwaye ekugqibeleni ndibabeka emngciphekweni. Ndicinga ukuba sisicwangciso sexesha elifutshane ukwenza imali-kwaye ihlazisa abaphulaphuli babo ngokuhamba kwexesha. Uninzi lwe yenza imali kwi-intanethi yenza oku. Kuya kufuneka bekhohlise kwaye bathenge izithembiso ukuze baqhubeke nezinto abazenzileyo ezikwi-Intanethi. Abaphulaphuli babo beza behamba njengoko befumanisa ukuba bakhohlisiwe.
Ukuba ufuna ubukho obukhulu be-intanethi kunye nokufikelela kubaphulaphuli be imithombo yeendaba zentlalo, ezona ndlela zilula zokwenza oku kukuqesha enkulu imithombo yeendaba zentlalo Oku kulandelayo unqwenela ukufikelela kuzo kunye nokwakha igunya. Ngaphantsi kwezikhokelo ze-FTC, ndiya kuhlala ndicacisa ukuba bangabaxhasi okanye ndiyahlawulwa ngokuvuma kwam. Kuba bendilumkile ukuba ndingabaphuli abaphulaphuli bam kuye nakubani na ofuna ukundiphosa inkunzi, abaphulaphuli bam abayikhathalelanga into yokuba ndihlawulwe ngayo. Baye baqonda ukuba nditsho nokuxhaswa kwam okuhlawulelwayo kuya kuhlala kunika ixabiso.
Ukuqesha igosa losasazo lwentlalo kunokubonelela ngolwazi oluphambili kunye nokubonisana okuya kunceda ukuqhuba ishishini lakho… kodwa esona sizathu sokuqesha umntu kukufikelela kubaphulaphuli nakwigunya labo ngakwimvume. Ngaphandle kwayo, unendlela ende ephambi kwakho. Ngayo, ungaqala ubukho bakho kwimidiya yoluntu kunye negunya elikwi-Intanethi.
tags: douglas karruSeti uthixoimithombo yeendaba zentlalo
Ngaba usete iiparameter kwii-Webmasters?
Ukuthetha ngoLwimi lwaBaphulaphuli bakho